Hello Nepal News » बार्सिलोनामै रहन मेस्सीले नयाँ अध्यक्षलाई बुझाए आफ्ना ‘चार सर्तहरूको सूची’ : के–के छन् ?
बार्सिलोनामै रहन मेस्सीले नयाँ अध्यक्षलाई बुझाए आफ्ना ‘चार सर्तहरूको सूची’ : के–के छन् ?
एजेन्सी, चैत २१
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका प्रमुख खेलाडी तथा कप्तान लिओनल मेस्सीले क्याम्प नोउमा आफ्नो भविष्यलाई निरन्तरता दिने सम्भावना बढेको छ । चर्चित खेल पत्रिका ‘युरो स्पोर्ट’मा प्रकाशित एक ताजा रिपोर्टअनुसार मेस्सीले बार्सिलोनासँग नयाँ सम्झौताका लागि आफ्ना केही सर्त तथा मागहरूको सूची क्लबका नयाँ अध्यक्ष जोआन लापोर्टालाई बुझाएका छन् । आफू अनुकूल अवस्थामा मेस्सी बार्सिलोनामै निरन्तर रहन तयार भएका छन् । त्यसका लागि मेस्सीले केही खास सर्त राखेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आफ्ना सर्तहरूप्रति नयाँ अध्यक्ष प्रतिबद्ध भए मेस्सी र क्लबबीच चाँडै सम्झौता हुने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय बार्सिलोनामा देखिँदै गएको परिवर्तन र मेस्सी स्वयंमा आएको परिवर्तनबाट उनी नयाँ सम्झौताका लागि तयार हुँदै गएको चर्चा सुरु भएको छ । अध्यक्ष लापोर्टाले पनि मेस्सीलाई राखनका लागि सम्पूर्ण प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन् । यो बताइन्छ कि, बार्सिलोनामा आफू अनुकूल वातावरण बन्दै गयो र क्लबले ठूला उपाधि जित्नका लागि प्रभावकारी खेल योजना ल्याउन सके मेस्सीले नयाँ सम्झौता गरेर बार्सिलोनामा करिअर लम्ब्याउन सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि बार्सिलोनामा उनले केही खास सुधार र केही कुराको निश्चितता भने मेस्सीले चाहेका छन् । ‘युरो स्पोर्ट’मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार मेस्सीले मुख्य रूपमा चार विषय क्लबसँग राखेका छन् ।
सर्त १ – टोलीको पुनर्निर्माणमा एक प्रतिभाशाली युवा फरवार्डकोसाइनिङ । मेस्सीले नयाँ अध्यक्षसँग एक प्रतिभाशााली युवा फरवार्डको अनुबन्ध गर्न माग गरेका छन्, जसले टोलीमा पूर्वखेलाडी लुइस स्वारेजको भूमिका पूरा गर्न सकोस् । मेस्सीले त्यो भूमिकामा आउने खेलाडी कम्तीमा लुइस स्वारेज वा पूर्वखेलाडी नेइमारको स्तरको अपेक्षा गरेका छन् । अहिले चर्चामा रहेका खेलाडी अर्जेन्टिनाका फरवार्ड सर्जियो अगुराएरो, जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका युवा स्टार अर्लिङ हल्यान्ड र फ्रेन्च क्लब लियोनका मेम्फिस डिपेको नामम र्चामा छ । क्लबले हल्यान्ड चाहेको छ तर प्रशिक्षक कोम्यान भने डिपेको पक्षमा छन् ।
तर, मेस्सीले नयाँ खेलाडीको अनुबन्धले हाल टोलीमा रहेका युवा खेलाडीको भविष्य सुरक्षित हुनुपर्ने पनि सँगै बताएका छन् । नयाँ खेलाडीको अनुबन्धले ला मासियाबाट सिनियर टोलीमा पुगेका युवा खेलाडी इलाइक्स मोरिबा, अन्सु फातीदेखि पेड्रीको भविष्य पनि सुरक्षित हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । बिस्तारै युवा खेलाडीको पुस्ता तयार पार्नका लागि पनि टोलीमा रहेका प्रतिभाशाली युवा खेलाडीलाई सुरक्षित तरिकाले टोलीमा राखेर लैजानुपर्ने मेस्सीको अडान छ । यी ३ जनै खेलाडीले बार्सिलोनामा अहिले साँच्चै प्रभाव जमाइरहेका छन् । मेस्सी यी ३ जनै खेलाडीलाई सिनियर टोलीमा कुनै पनि हालतमा सुरक्षित चाहन्छन् ।
सर्त २ – डिफेन्स लाइनमा प्रभावशाली २ जना खेलाडीको अनुबन्ध । मेस्सीले टोलीलाई सुधार गर्न फरवार्ड मात्रै नभएर डिफेन्डरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि उनले नयाँ सिजनमा जानुअघि डिफेन्समा २ जना प्रभावशली खेलाडी अनुबन्ध गर्नु सुझाव दिएका छन् । तर, यसो गर्दा हाल टोेलीमा रहेका रोनाल्ड अराउजो, सर्जिनो डेस्ट, ओस्कार मिङ्गुएजालाई छुन नपाइने सर्त मेस्सीले राखेका छन् । अहिले बार्सिलोनामा यी ३ जना युवा डिफेन्डर नै रक्षापंक्तिको मुटु बनेका छन् । ३ जनै युवा खेलाडी भए पनि उनीहरूले टोलीलाई मनग्ये योगदान दिइरहेका छन् । मेस्सीले फ्रेन्च डिफेन्डर क्लमेट लेङलेटको विषयमा केही बोलेका छैनन् ।
सर्त ३– मेस्सीले रोनाल्ड कोम्यानसँग आफ्नो टिम र ड्रेसिङ रुमबीच राम्रो सम्बन्धका लागि माग गरेका छन् । टोलीलाई सधैं बिनासमस्या अघि बढाउन र आन्तरिक कलहमा फस्न नदिनका लागि खेलाडी, प्रशिक्षक र क्लबको प्राविधिक टोलीबीच राम्रो समझदारीका लागि माग गरेका छन् । त्यसका लागि उनले आफूले सबै पक्षमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सर्त ४– च्याम्पियन्स लिग जित्ने खेल योजना । चाँडै ३४ वर्ष पुग्न लागेका मेस्सीले नयाँ सिनजमा नयाँ बोर्डले ठूला उपाधि जित्नका लागि रचनात्मक खेल योजना ल्याउनुपर्ने कुरा मुख्य रूपमा उठाएका छन् । यो सिजन ला लिगा जिते वा नजिते पनि नयाँ सिजनमा बार्सिलोनाले शतप्रतिशत उपाधि जित्ने लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि क्लबले प्रभावकारी योजना अघि सानुपर्ने मेस्सीको अर्को सर्त रहेको छ । बार्सिलोनाले सन् २०१५ मा च्याम्पियन्स लिग जितेयता पुनः यो प्रतियोगिताको फाइनलसम्म पुग्न सकेको छैन । जसबाट मेस्सी निकै निराश रहेका छन् । यही निराशाका कारण मेस्सीले गत समरमै क्लब छाड्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २१ चैत्र २०७७, शनिबार १०:५०